Mahazo Ny Tena Fiangonana Spaghetti Manidiny Voalohany Ny Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2016 16:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Ελληνικά, Esperanto , English
Sary navoakan'i Kevin Rothrock.
Ny fiangonan'ny Mpamonjy Be Indrafo dia nitsangana tao Nizhny Novgorod efa mihoatra ny zato taona izao. Naorina mba hanandratana ny voninahitry ny fahavelomana mahagagan'i Tsar Alexander III taorian'ny lozam-piarandalamby tao Borski tamin'ny taona 1888, rehefa nambara fa nanohana teo an-tsorony tafo iray nirodana ny Tsar, ary ny fianakaviany kosa afa-nitsoaka niala ireo korontana. Nampiroborobo ny fampielezankevitra ilay loza nitranga tamin'ny fandresena lahatra fa notsimbinin'Andriamanitra ny Tsar.
Ny herinandro lasa teo, nahazo namana vaovao ny fiangonana, niorina eo amin'ny kihon-dalana: fiangonana Rosiana voalohany ho an'ny Spaghetti Manidina. Ny 25 Martsa, nitafa tamin'ny mpanao gazety ireo “Pastafarians” avy ao Nizhny Novgorod (araka ny fiantso ireo mpivavaka) mba hanambara ny fisokafan'ny fiangonan'izy ireo, izay hamory olona isaky ny zoma (Azonao jerena eto ireo sary marobe mikasika ny zava-nitranga.)
Ambaranay marimarina fa io no fiangonana voalohany ho an'ny Spaghetti Manidina aty Rosia. Angamba io no voalohany eto amin'izao tontolo izao, saingy tsy zavatra azonay hamafisina izay. Toy ny mahazatra, mihaona amin'ny vahoaka ao anaty tambajotra sosialy foana ny Pastafarians, noho ny tsy fananana toerana manokana [handraisana olona],” hoy Dmitry Znamensky, iray amin'ireo mpikambana mpitarika ny fiangonana.
Sary kanto “ara-pivavahana” manaingo ny trano fivavahana vaovaon'ny Nizhny Novgorod. Sary: Petr Kuznetsov / YouTube
Nanome toky ireo mpanao gazety i Mikhail Iosilevich, nanorina ny fiangonana tao Nizhny Novgorod fa tsy hihaza an'ireo finoana mahazatra ao Rosia ireo Pastafarian, tamin'ny fanitrikitrhana fa zavatra katsahan'ny fiangonany fotsiny ny fitadiavana fitondra mitovy sy toerana kely ho azy manokana. Efa vonona ny hiaro ny toeran'izy ireo ny vondrony mandritry ny fotoana fanokafana, ary koa, haka ireo mpitandro filaminana hiambina mandritra ny fankalazàna. Nilaza ireo mpikarakara fa tsy hanaiky herisetra mihintsy izy ireo avy amin'ireo vondrom-pinoana tena mahazatra ao an-tanàna (avahana amin'izany ireo Mpino Ortodoksa), saingy manana olana izy ireo momba ny lohataona vaovao “manaitra” ireo olona manana “aretin-tsaina isan-karazany”.
Herinandro vitsivitsy mialoha ny fisokafana ofisialin‘ny fiangonana , nanao fety iray tao an-tanana tao amin'ilay faritra i losilevich sy ireo ondriny sasantsasany, nanasàna ny fikambanana iray ao an-toerana misy ireo vehivavy sy “Fikambanan'ireo Mpanandran-tsira Malalaka” ao Nizhny Novgorod, izay “Fahafahana! Fitoviana! Fahatsapàn-tena!” no teny fanevany. Nahasarika olona ampolony ny fety, izay nitsotsotra anatin'ireo fanaka IKEA, nisotro labiera sy kvass, nihinana krepy (“Voaompa ny Spaghetti Manidina teto”, vehivavy iray nikarakara nahandro iray mafana aza nanao vazivazy), sy namaky tononkalo.
Ny Fiangonana Pastafarian-n'ny Spaghetti Manidina, ny Fikambanan'ireo vehivavy ao Nizhny Novgorod, ary ny Fikambanan'ireo Mpanandran-tsira Malalaka, mikarakara fety iarahana manamarika ny famitàna ireo asa fototra fandravahana ny efitranon'ny fiangonana.
Tamin'ny fotoana iray voatokana nony takariva, nitsangana i losilevich ary nanazava izay mety ho dikan'ny Pastafarian taminy. (Raha ny fahitàna azy, nanao be loatra ny Spaghetti Manidina ho toy ny fananany izy ka toa hadinony ny anaran'ilay Amerikana izay namorona ny hetsika.) Miaraka amin'ny labiera eny an-tanana, mitsiky toy ny nihaino sy nivazivazy azy ny vahoaka, nolazain'i losilevich fa manome azy : ‘aroloha colander’ ilay paty miendrika biby, ary ny vazivazy mahafinaritra natao ho toy ny tsikera maneso, ho tahaka ny olona tsy mino, dia manome azy ny fitaovana ho entina manosika ny fitenenan-dratsy ny fivavahana ho lasa heloka bevava :
“Misy karazany maro ny finoana, ary mitovy avokoa ireo izy ireo [araka ny lalàna Rosiana]. Manan-jo hanaraka izay finoana tiany ny tsirairay. Fanampin'izany, misy lalàna miaro ireo fihetseham-po ara-pinoan'ny olona – ‘ireo mpino’. Hita amin'ireo firenena maro ny lalàna sahala amin'io, anisan'izany i Rosia. […] Tsy misy firenena eto amin'izao tontolo izao, araka izay fantantsika haramin'izao, ka manana lalàna miaro ny fihetsehampon'ireo olona tsy mino. Samy mahafantatra ny tsirairay fa ireo tsy mino dia tsy mba manana fihetsehampo, noho izany zavatra tsy hisy mihitsy ny hoe handratra azy ireo. Ary koa misy ireo tranga manerana izao tontolo izao, izay arovan'ny lalàna ireo mpino, ary diso foana matetika ireo tsy mino. […] Raha avela amin'izao tsy misy fiarovana ireo tsy mino, dia ilaina ny hanorenana fivavahana ho azy ireo manokana, mba hampitoviana tantana ny kianja” .
Ny lalàna rosiana mandrara ireo fitenenan-dratsy imasom-bahoaka mikasika ny fanohitohinana finoan'olona dia nankatoavina tamin'ny 1 Jolay 2013. Izay rehetra tratra mandika io lalàna io dia migadra herintaona avy hatrany any amponja. Nitarin'ireo mpanao lalàna io lalàna io taorian'ny fitsarana ny Pussy Riot. Hatramin'izao, lehilahy tokana no voaheloky ny tribonaly vokatr'ilay lalàna: tovolahy tao Izhevsk, izay nandefa tamin'ny tambajotra sary nahatezitra ireo vondrona Silamo. (Nohelohina hanao asa an-terivozona nandritra ny 200 ora ho an'ny fiarahamonina izy.)
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, lehilahy iray tao Stavropol nantsoina hoe Viktor Krasnov no notsaraina vokatry ny fitenenan-dratsy ireo Kristiana tamin'ny fanoratana hoe “Tsy misy Andriamanitra” tao anaty sehatra iray fifampiresahana tety anaty tambajotra. Mialoha ny fitsaràna azy, noteren'ny mpitsara handany iray volana manontolo natokana tany amin'ny toeram-pitsaboana ara-tsaina aloha izy, mba hanombanan'ny mpitsabo ny fahasalamany. Krasnov, izay nanao ireo tsikera maro ihany koa mikasika ny fankahalàna jiosy tamin'ny tambajotra, dia mandà tsy hiala tsiny amin'ny tsy fanekeny ny tsy fisian'Andriamanitra. Miatrika taona iray any amponja izy, raha fantatra ho tompon'antoka.
Ny volana Janoary 2016, i Andrei Filin no Pastafarian voalohany tao Rosia afaka naka sary hatao amin'ny fahazoandàlany hitondra fiara niaraka tamin'ny srondohany toy ny lovia fanatantavanana teo ambony lohany. Vita avy amin'ny tady plastika, fa tsy vy, ary norarian'ny vadin'ny Filin nilay satro-doha, heverina ho tsy maintsy ataon'ireo ao amin'ny fiarahamonina Pastafarian.
Azia Atsinanana 16 ora izay